Madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in waxyaabo aanu filayn ay ku noqotay, in laga horyimaado Xukuumadda”Dhageyso” |
Madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in waxyaabo aanu filayn ay ku noqotay, in laga horyimaado Xukuumadda”Dhageyso”
Madaxweynaha Dowladda Federalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid, ay isku waafaqsan yihiin in la soo dhiso Xukuumad loo dhan yahay.
Madaxweynaha, ayaa wuxuu sheegay in waxyaabo aanu filaynin ay ku noqotay in dadka qaarkood ay ka hor yimaadaan Xukuumadda, isagoona kala jeeda Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, oo saluugsan in Xukuumadda lagu soo daro ilaa afar xubnood oo lala xiriiriyo Madaxtooyada.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa afka ku ballaariyay in Xukuumaddaan ay noqon doonto mid ay iska dhex wada arki doonaan dhammaan bulshada Somaliyeed, iyadoo la tixgelinaaya halbeyga awood qaybisga beelaha ee 4.5.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inay soo laaban karayaan tiro ka mid ah Golihii Wasiirada ee Xukuumaddii hore, iyadoo qaarka kalana uu sheegay inaanay soo laaban karin, laakiin ay berrito soo laaban karayaan, sida uu yiri.
Madaxweynaha, ayaa sheegaaya in Xukuumaddu ay tahay mid kooban oo aynaan dhammaan ka soo wada muuqan karin Siyaasiyiinta, laakiin ay aqbalaan in berrito ay ku soo laaban karayaan Xukuumadda.
Sidoo kale waxa uu iftiimiyay in Xukuumadda la soo dhisi doono ay ka mid noqon doonaan sida uu muujiyay, Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ay iyagu ku doodaaya inay badbaadinayaan Qaranka.
Madaxweynaha, ayaa ka baaqaaya inay Siyaasiyiintu wataan aragti mideysan oo ay dalka ku badbaadinayaan, oo aynaan wadan aragti siyaasadeed oo dalka ka horjoogsan kara in horu-socod uu sameeyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay inaan loo baahnayn aragti siyaasadeed oo guracan, taasoo kala qaybineysa bulshada Somaliyeed. Wuxuuna meesha ka saaray cid gaar ah oo uu ku eedeynaayo inay qabto aragtidaasi, balse ay ka duceysanayaan, sida uu yiri.
Dhanka kale Madaxweynaha Somaliya, ayaa soo hadalqaaday in dadka Somaliyeed ay dhawaan maqli doonaan Xukuumad cusub, taa oo sida uu sheegay u baahan taageerada shacbiga.
Hadalka ka soo yeeray Madaxweyne Xasan, ayaa waxa uu ku soo aadayaa, xilli galabta ay midoobeen labada Kudladood ee Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, iyagoona sheegay inay ka soo horjeedaan in Golaha Wasiirada lagu soo daro afar xubnood, oo ay horey kaga diggeen.